यात्रु नहुँदा डडेल्धुरा बसपार्क सुनसान ! | ईमाउण्टेन समाचार
यात्रु नहुँदा डडेल्धुरा बसपार्क सुनसान !
डडेल्धुरा, ८ कार्तिक । डडेल्धुरा बसपार्कमा यतिबेला यात्रु नभए पछि सवारीसाधनले बसपार्क भरिभराउ छ । अरुबेलाको चाडवाडमा घर जानेहरुको भिडले भरिभराउ हुने डडेल्धुरा बसपार्क अहिले सुनसान छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ६ महिना बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात एक महिनादेखि खुले पनि सवारीसाधनले यात्रु पाएका छैनन् ।
विगतमा टिकट नपाएर यात्रु घण्टौंसम्म बस कुरेर गन्तव्यसम्म पुग्ने गरेका थिए । तर अहिले सवारीसाधनले यात्रु पर्खिरहेका छन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर टिकट बुकिङ खुला गरे पनि गाडीले यात्रु पाएका छैनन् ।
विगतका वर्षमा घटस्थापनादेखि फूलपातीसम्म झण्डै दैनिक दुई सय ४१ को हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात बाहिरिने गरेका थिए । अहिले भने दैनिक ५० देखि ६० सवारी साधनमात्र सञ्चालनमा रहेका यातायात व्यवसायीको भनाई छ ।
चाडवाडको समयमा बढी भाडा लिने तथा यात्रुलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने बसको अनुगमन गर्न सादा पोशाकमा प्रहरी खटाइएको छ । त्यस्तै तीन स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष पनि स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्र नेपालले बताउनुभयो ।
६ महिना थन्किएका सार्वजनिक सवारी मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि यात्रु नहुँदा समस्यामा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
देश/समाज‐मा वर्गिकृतDadeldhuraBuspark, DadeldhuraNews
सिमेन्टको बोराभित्र लुकाई राखेको लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ
डडेल्धुरामा क्षमता भन्दा धेरै यात्रु बोक्ने सवारी साधनमाथि कारबाही
सार्वजनिक शौचालयको अभाव, यात्रु र स्थानीयवासीलाई सास्ती
कहिले हुन्छ खलंगा बसपार्कको पुनः निर्माण ?
गौरापर्व नजिकिएसँगै डडेल्धुरामा किनमेल गर्नेको भिड
दशैं मनाउन २१ लाख मानिसले राजधानी छाडे